Blu life 8 ifoni | Kusuka kuLinux
Inkampani imikhiqizo eluhlaza okwesibhakabhaka Iyinkampani entsha emakethe yamadivayisi eselula, le nkampani yaseMelika ibikhula ngokushesha okukhulu ngoba inikela ngomakhalekhukhwini abashibhile futhi inekhwalithi enhle iyonke. Namuhla ngizokhuluma ngaye impilo yeblu 8 umakhalekhukhwini okuyidivayisi esezingeni eliphakathi nendawo (njengamanje) eneprosesa eyi-8-core esebenza ku-1.7 GHz ephelezelwa yi-Mali mp450 quad core processor processor ene-1GB ye-RAM ne-8GB yememori yangaphakathi (i-6GB iyatholakala kumsebenzisi) umakhalekhukhwini omuhle kakhulu uma ubheka intengo yawo yamadola ayi-180 noma ama-pesos angama-2800 eMexico.
Ukuhlaziya umakhalekhukhwini ngokuphelele, sithola ikhamera eyi-megapixel engu-8 ethatha izithombe ezinhle kakhulu ngaphansi kwezimo zokukhanya ezanele, kodwa-ke, amashothi amancane enza isithombe sibonakale "siluhlaza okwesibhakabhaka" okungukuthi, imibala akuyona impela. lokhu kulindelekile njengoba kungumakhalekhukhwini ongabizi kakhulu. Ikhamera engaphambili ingama-megapixel ama-2 futhi ithatha ama-selfies amahle kakhulu uma ukukhanya kwanele. Ukuthwebula ividiyo kugcwele i-hd 1080p egcwele yize izinga lozimele lingeyona i-30fps njengoba lisho ebhokisini lalo. Inkinga ukuthi ukukhanya okuhle kakhulu kuyadingeka ukuze ikhamera isebenze njengoba kuhlosiwe, yize ngokuvamile inekhamera engcono kune-moto g (isizukulwane sokuqala). Okufanele kushiwo ukuthi i-flash ekhokhelwe yekhamera enkulu (i-8 MP) inokukhanya okuhle kakhulu futhi isiza kakhulu lapho ithatha izithombe nevidiyo ngezikhathi zasebusuku.
Uhlelo lokusebenza olufakwe ngalo impilo eluhlaza okwesibhakabhaka 8 es Ijellybean ye-Android 4.2.2okudala kancane kepha ungakhathazeki ungavuselela ngaphandle kwenkinga I-Android 4.4.2 kitkat futhi ukuvuselelwa kwenza ushintsho lwezithombe zokuqala ngesiqubulo senkampani entsha, okwamanje akwaziwa ukuthi ngabe le cell phone izoba nokuvuselelwa okusha I-Android 5.0 lollipop.
Isiginali ye-Wi-Fi inebanga elihle kakhulu, ibanga elicishe libe ngamamitha angama-50, ngaphezu kwezindonga, ifenisha nokunye ukuphazamiseka ikwazile ukuthola isignali enhle (imigoqo emi-2 ka-4) yalelo banga. Mhlawumbe kwabanye akubukeki kahle ukuthi i-blu life 8 ine-bluetooth 3.0 kwazise njengamanje ingu-4.0 kodwa ngokujwayelekile ngiyakutshela ukuthi ayithinti neze kwazise wonke amadivayisi engiwasebenzisile nge-bluetooth axhume kahle ngaphandle kwezinkinga .
Ikhamera enkulu ye-Blu Life 8
Manje okuwukuphela kwento esisele ukuyimboza ukuthi ilunge kangakanani ngemidlalo yevidiyo, akunjalo? Mina njengomdlali noma njengegeyimu ngingakutshela ukuthi lokhu impilo yeblu 8 umakhalekhukhwini Qalisa ngaphandle kwemidlalo enenkinga njengokungena kwabafileyo, izitshalo ezilwa namaZombi 2, ukulwa kwanamuhla 4 no-5, inhlamvu efile engu-1 no-2, iBB Racing, i-lionheart kanye nama-emulators ama-nes, i-super Nintendo, i-gameboy advance, i-Nintendo ds, i-n64, i-psx, mame, neo geo. Konke lokhu kuhamba kahle kakhulu futhi nomakhalekhukhwini we-blu ulwa futhi uqala ukushisa, okuthi uma udinga ukudlala ngawo ukumiswa kwawo kunama-emulators we-psp, ps2, i-gamecube, yize uzomangala ukuthi eminye imidlalo kulezo zingxenyekazi iphelele okudlalekayo futhi Kungenxa yamakhokho ayi-8 okuthi i- impilo eluhlaza okwesibhakabhaka 8.
Izinga lezingcingo lihle impela futhi umakhalekhukhwini uphinde uxhase ama-sim slots amabili, usayizi owodwa ojwayelekile we-sim kanye neminye imicrosim futhi kulula kakhulu ukuzihlela. Ibuye inikeze isikhala sokunweba se-microsd esifinyelela ku-64gb (ebhokisini ithi kuphela ama-32gb max.) Kepha empeleni umthamo wayo omkhulu ngu-64gb!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Blu life 8 ifoni
Ngoba ibhethri libuthakathaka kakhulu ngokusetshenziswa ngemuva kokuthi kubalwe ukushaja
I-Wesnoth umdlalo womdabu wamathiphu we-GNU / Linux +